नेपाली काँग्रेस बाजुरा प्रदेश ख काे मतदान सुरू - बडिमालिका खबर
बाजुरा — नेपाली काँग्रस बाजुराको ७ औँ जिल्ला अधिबेशनमा प्रदेश (ख) मा मतदान सुरू भएकाे छ । प्रदेश (ख) को सभापतीमा रंग बहादुर खाती र देब बहादुर रोकायाकाे टिममा सहमती नहुदा मतदान प्रकृया अगाडी बढाएकाे हाे । नेपाली काँग्रेस मतदान अधिकृतका अनुसार सहमती हुन नसकेपछि बिहिबार बिहान १०:१५ बजे देखी मतदान सुरू गरिएकाे जनाएकाे छ । जिल्लाकाे प्रदेश (ख) मा ७ सय २७ मतदाता रहेका छन । जिल्ला समन्वय समितिकाे प्रङ्गणमा मतदान भइरहेकाे छ ।
प्रदेश (ख) मा हुने मतदानमा रंग बहादुर खाती शेर बहादुर देउवा पक्षका रहेका छन भने देब बहादुर रोकाया पौडेल- सिटौला पक्षबाट मतदानमा सहभागी भएका छन । प्रदेश ख मा ७ सय २७ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधी रहेका छन । निर्बाचन समितिका अनुसार मतदान प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको जनाएको छ ।
त्यस्तै उपसभापतीमा २ जनामा ६ जनाको उम्मेद्धारी रहेको छ । जसमा शेर बहादुर सिंह, दिल ब. बुढा, गगन जंग बुढा, हरिचन्द्र पाध्याय, सत्य कुमारी रोकाया र पदम ब. बडुवाल रहेका छन ।